Soo-saareyaasha & Alaab-keenayaasha kaadiheysta biyaha ee furan - Shiinaha Warshadda kaadiheysta biyaha ee furitaanka yar
Kaadiheysta fuuq-baxa cayaaraha dibadda
Kaadiheysta fuuq-baxa waxay ka samaysan tahay sun aan sun lahayn, ur lahayn, hufan, caag jilicsan ama wax taaj oo kale oo lagu durayo polyetylen. Waxaa lagu ridi karaa meel kasta oo ka mid ah boorsada jeebka inta lagu jiro buur fuulista, baaskiil wadista, iyo safarka dibadda. Way fududahay in la buuxiyo biyo, ku habboon in la cabbo, la nuugo sida aad wax u cabto, loona qaado. Jilicsan oo raaxo leh.
Bacda Biyaha Kaadiheysta Fuuq Baxa Ciyaaraha
Tani waa qalab muhiim u ah orodyahannada. Furitaanka ballaaran wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhaqso biyo ugu durto duurka. Ha ka welwelin ilaha biyaha markaad jimicsiga sameyneyso, oo waligaa ha faaruqin.
Laabista Bacda Biyaha Lagu Rago
Waxay leedahay boorso yar oo la qaadan karo oo si xariifnimo ku jirto loogu talagalay. Farqiga u gaarka ah buluug iyo madow. Waxaa loo habeyn karaa cabir kasta ama walxaha aad u baahan tahay, sida TPU, EVA, PEVA. Oo ay ka mid yihiin dhererka tuubbada nuugista. Naqshadeynta gaarka ah ee daboolka boodhka ee sanka nuugista ayaa ka fogaan karta ururinta boodhka. Ku habboon nashaadaadyo kala duwan oo dibedda ah.
BPA Ciidanka Kaadiheysta Bilaashka ah ee Cagaaran
Ciidanka boorsada biyaha isboortiga ee cagaaran, naqshadeynta furitaanka yar. Tikniyoolajiyadda daabacaadda-soo-noqnoqota, qaababka saddex-cabbir ah. Daboolka boodhka ee sanka nuugida ee sida aadka ah loogu talagalay. Kaliya inaan kuu keeno khibrada ugu fiican. U qaado safar dibedda ah.
Kaadiheysta Kaydinta Biyaha
Waa alaab loo baahan yahay in lagu ciyaaro ciyaaraha dibadda. Xusuusnow shaqooyinka waxqabadka, wareejinta iyo ilaalinta deegaanka. La kulan baahiyaha buuxinta banaanka. Maaddooyinka u habboon cuntada ee u habboon cuntada, si xor ah u isticmaal. Waxay ku habboon tahay buur fuulista, baaskiil wadista, orodka iyo ciyaaro kale oo badan oo dibedda ah.
Bacda Biyaha Dibedda Tayada Sare ee Ku Haboon
Waxay kuu noqon doontaa kaaliyahaaga ugu fiican dibadda, waa la qaadi karaa, xirxiran yahay, adkeysi leh, aan sun lahayn, urna lahayn. Qalabka darajada cunnada ayaa kuu keenaya khibrada ugu fiican. Waxay ka ciyaari kartaa door aad u fiican banaanka. U oggolow inaad xoogga saarto orodka, gudubka, ama fuulitaanka buurta.
Bacda Kaydinta Baaskiil Kaamaynta Baaskiil
Kani waa bac wanaagsan oo biyo furan. Deegaanka ku habboon oo aan lahayn wax BPA ah. Midabka buluugga ah ee cusub oo moodada ah ayaa kaa dhigaya qofka ugu yaabka badan ciyaaraha. Waxaan sidoo kale ku siin karnaa adeegyo la habeeyay sida qalabka wax soo saarka, qaababka, midabada, iyo astaamaha. Noqo kalkaaliyahaaga isboorti ee banaanka.
Kaadiheysta Dareeraha Cayaaraha Dibadda
Lammaanaha ugu fiican ee isboortiga dibedda. La qaadan karo, xidho u adkaysta, adag oo wax ku ool ah. Qalab tayo sare leh oo deegaanka u fiican ayaa kuu oggolaanaya inaad ku dhowaato dabeecadda adoo ilaalinaya. Waxay ka ciyaartaa door aad u wanaagsan cayaaraha banaanka sida baaskiil wadista, fuulitaanka buuraha, orodka, iyo iskutallaabta. Aynu siino ciyaar buuxda awoodaada adigoon walwal qabin.
Isboortiga Dibadda ee TPU / EVA / PEVA Fuuqbaxa Bannaanka
Bacda biyaha isboortiga waxqabadka sare leh. Dekedda duritaanka biyaha dhexroor weyn, fududahay in la isticmaalo. Wax aamin ah oo aan dhadhan lahayn, oo ku siinaya khibrada ugu fiican. Mashiinka nuugista ee snap-ka ayaa si otomaatig ah u xirmaya markii aan la isticmaalin. Tuubbada nuugista ayaa lagu hagaajin karaa boorsada fuuqbaxa, taas oo ku habboon dib u buuxinta biyaha inta lagu jiro jimicsiga.